Training 1: Ukuhambisa UkuXhumana
Amanye ama-sites ahlobene
I-Profile yakho Izimpumelelo Izitifiketi Phuma
Ngiyabonga ngempendulo yakho
Ukubuka konke kwe zifundo
Uhlu lwamagama Yesifundo
INGXENYE 1 YE 11
1.‎1 FUNDA: Kuyini UkuXhumana?
1.‎2 Hlola Ukuqonda Kwakho
INGXENYE 2 YE 11
2.‎1 FUNDA: UkuXhumana Ngokwenza
2.‎2 Hlola Ukuqonda Kwakho
INGXENYE 3 YE 11
3.‎1 FUNDA: I-Two-way Comm
3.‎2 Hlola Ukuqonda Kwakho
INGXENYE 4 YE 11
UkuXhumana Training Drills
4.‎1 FUNDA: UkuXhumana Training Drills
4.‎2 Hlola Ukuqonda Kwakho
INGXENYE 5 YE 11
Training 0: Yiba Lapho
5.‎1 FUNDA: Training 0: Yiba Lapho
5.‎2 Hlola Ukuqonda Kwakho
INGXENYE 6 YE 11
Training 0: Ukubhekana
6.‎1 FUNDA: Training 0: Ukubhekana
6.‎2 Hlola Ukuqonda Kwakho
INGXENYE 7 YE 11
7.‎1 FUNDA: Training 1: Ukuhambisa UkuXhumana
7.‎2 Hlola Ukuqonda Kwakho
INGXENYE 8 YE 11
Training 2: Ama-acknowledgments
8.‎1 FUNDA: Training 2: Ama-acknowledgments
8.‎2 Hlola Ukuqonda Kwakho
INGXENYE 9 YE 11
Training 3: Umbuzo Ophindaphindayo
9.‎1 FUNDA: Training 3: Umbuzo Ophindaphindayo
9.‎2 Hlola Ukuqonda Kwakho
INGXENYE 10 YE 11
Training 4: Ama-Originations
10.‎1 FUNDA: Training 4: Ama-Originations
10.‎2 Hlola Ukuqonda Kwakho
INGXENYE 11 YE 11
Izindlela Zokugcina Zokusebenza
11.‎1 Izingxenye ZokuXhumana
11.‎3 I-Two-way Comm
11.‎4 Ama-Training Drills
true communication /zu-ZA/tools-for-life/communication/steps/what-is-communication.html read 7 11 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/communication_zu_ZA.jpg UkuXhumana
7.‎1 FUNDA LENDATSHANA
Le-drill ikufundisa ukuletha ukuxhumana komunye umuntu ukuze athole futhi aqonde lokho okucelayo noma omtshela ukuthi akwenze. Ukuthi usho okuthile komunye umuntu akusho ukuthi uzokuzwa noma akuqonde. Ukuxhumana kwakho kudingeka kucace futhi kuzwakale ngokwanele ukuze kuqondwe.
Wena nomunye umuntu nizihlalele cishe ngamamitha amathathu, nibhekene.
Le-drill yenziwa ngale ndlela elandelayo:
Thola incwadi yezindaba elula kakhulu, enjenge Alice in Wonderland, okuyiyona engcono ukuyisebenzisa uma ungayithola, lapho kunezindawo eziningi khona endabeni lapho kusetshenziswa khona ukuxhumana. Ngamanye amazwi, umbhalo wale ncwadi uthi “Uthe…”
Wena: Khetha ibinzana encwadini. Fundela lo muntu ibinzana ngokuzwakalayo, kodwa ushiye lokhu okuthi uthe.
Isibonelo, ibinzana elisencwadini u-Alice in Wonderland lithi:
“Cha, ngizobheka kuqala,” kusho yena.
Lapho ufundela lowo muntu ongakuwe lelo binzana, ubungathi, “Cha, ngizobheka kuqala.”
Uqala ngokuzifundela wena ibinza. Ngemuva kwalokho cabanga ibinzana futhi ulenze umcabango wakho. Bese usho ibinzana komunye umuntu kungathi kungumbono wakho. Uma uyihambisa kumuntu ongaphesheya kwakho, kufanele kuzwakale kungokwemvelo, hhayi njengokuthile okufunda ngokuzwakalayo. Kumele futhi kube phezulu ngokwanele ukuba akuzwe futhi kucace ngokwanele ukuba yena akuqonde.
I-coach: Uma wenelisekile ukuthi lokho okushiwo ngumfundi kufikile lapho ukhona futhi uyakuqonda, yithi “Kuhle.”
Yenza ukuba umfundi aphindaphinde noma imuphi umusho ongafikanga lapho ukhona uze waneliseke ukuthi ufikile. Bese emeu-acknowledge bese uthi “Kuhle.”
Wena: Lapho i-coach ethi “Kuhle,” khetha elinye ibinzana encwadini bese uqhubeka ne-drill, uphinda lezi zinyathelo.
I-coach ithi “Qala” ukuqala i-drill, “Kuhle” uma ukuxhumana kutholwa noma “Yilokho” uma ukuxhumana kungamukelwanga. “Yilokho kuphela,” kusetshenziselwa futhi ukumisa ingxoxo noma ukuqeda umsebenzi. Uma isikhathi se-drill siphelile ngengxoxo, i-coach kufanele athi “Qala” futhi ngaphambi kokuthi iqale kabusha.
I-drill yenziwa kuze kwenzeke lokhu okulandelayo:
1. Uzizwa ukwazi ukuletha kahle ukuxhumana kube sengathi umcabango wakho.
2. Ukuxhumana kwakho kwamukelwa ngomunye umuntu futhi kuyaqondakala.
3. I-coach wakho wenelisekile ukuthi ungakwenza lokho.
QAPHELA: Ukuze uqhubeke, kufanele uqedele zonke izinyathelo zangaphambilini kule isifundo. Isinyathelo sakho sokugcina esingaphelele ngu
Buyela emuva esinyathelweni sami sokugcina
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.
Buyela emuva ufunde indatshana futhi
Qedela Lesi Sinyathelo
© 2001–2022 I-Church of Scientology International. Onke amalungelo agodliwe.
Bhalisa nge-email yakho
Yebo, ngicela ungithumele eminye imininingwane nge-Scientology.
noma usebenzise enye yalezi zinkonzo
Ngena ngemvume nge-email yakho
Siyaxolisa, igama lakho lomsebenzisi noma iphasiwedi ibingalungile.
Sicela ubheke iphasiwedi yakho bese uzama futhi.
Qaphela: Izifundo ze-Scientology ezi-Online sisandakuvuselelwa kuhlelo lwezifundo ezintsha. Uma ubune-logon ku-system yezifundo yangaphambilini, zama ukungena ngemvume lapha.
Cha ngiyabonga, qhubeka ngokupheqa
Uxolo, %email% ayaziwa njengegama lomsebenzisi noma ikheli le-email.
Setha kabusha Iphasiwedi yakho
Sicela unikeze ikheli le-email olisebenzisile ngenkathi ubhalisela i-account yakho.
Sizokuthumela i-email enesixhumanisi sokusetha kabusha iphasiwedi yakho.
Ikheli le-email selivele lisetshenziswa
Uzamile ukudala i-logon entsha, kepha i-account yomsebenzisi isivele ikhona nge-email.
Ingabe usuvele unayo i‑Scientology logon?
Dala i-logon entsha ngekheli le-email elihlukile
Uqede izifundo zakho ezi-online! Sicela ufake igama lakho nesibongo njengoba kufanele zivele kwisitifiketi sakho.
Bhala umyalezo ku-Supervisor wakho ngezansi futhi uzophendulwa nge-email: